I-PowerChord: Ulawulo lweNkokeli yeNdawo ekwiNdawo ePhakathi kunye noSasazo lwaMashishini aSasazwe ngumthengisi | Martech Zone
I-PowerChord: Ulawulo lweNkokeli yeNdawo ekwiNdawo ePhakathi kunye noSasazo lweempawu eziSasazwe ngabathengisi
NgoMvulo, nge-27 kaDisemba ngo-2021 NgoMvulo, nge-27 kaDisemba ngo-2021 UStephanie Shreve
Iibrendi ezinkulu zifumana, kokukhona iindawo ezihambayo zivela. Iimpawu ezithengiswa ngothungelwano lwabathengisi basekhaya zineseti entsonkothileyo ngakumbi yeenjongo zeshishini, izinto eziphambili, kunye namava akwi-intanethi ekufuneka aqwalaselwe - ukusuka kumbono webrand ukuya kwinqanaba lendawo.
Iimveliso zifuna ukufunyanwa lula kwaye zithengwe. Abathengisi bafuna izikhokelo ezintsha, ukugcwala kweenyawo ezininzi, kunye nokuthengisa okwandisiweyo. Abathengi bafuna ulwazi olungenamvisiswano kunye namava okuthenga - kwaye bafuna ngokukhawuleza.
Iintengiso ezinokuthi zibekho zinokuba ngumphunga ngokuqhwanyaza kweliso.
Ukuba umthengisi ufikelela phakathi kwemizuzu emihlanu ngokuchasene nemizuzu engama-30, amathuba okunxibelelana ngokuphila aphucula ngokuphindwe kayi-100. Kwaye amathuba okukhokelela ekuqhagamshelwaneni naye kwimizuzu emihlanu atsibe ngamaxesha angama-21.
Ingxaki yeyokuba indlela yokuthenga ayifane ikhawuleze okanye ingabinakhuhlwa kwiimveliso ezithengiswa ngumthengisi. Kwenzeka ntoni xa umthengi eshiya iwebhusayithi ye-brand egcinwe ngononophelo ukuze aphande ukuba ungathenga phi ekuhlaleni? Ngaba loo nto ikhokelela kumthengisi wasekhaya uguqule okanye iqokelele uthuli kwi-inbox? Ulandelelwano lwenzeke ngokukhawuleza kangakanani-ukuba kunjalo?
Yindlela ekholisa ukuthembela kuxwebhu olungahambelaniyo kunye neenkqubo ezingangqinelaniyo. Ngumendo ozele ngamathuba alahlekileyo kubo bonke abachaphazelekayo.
Kwaye iyatshintshwa yisoftware ezenzekelayo.
Isishwankathelo sePlatform yePowerChord
I-PowerChord sisisombululo se-SaaS seempawu ezithengiswa kumthengisi ezikhethekileyo kulawulo olukhokelayo lwasekhaya kunye nokuhanjiswa. Iqonga eliphakathi lidibanisa ezona zixhobo zinamandla zeCRM kunye nemisebenzi yokunika ingxelo ukukhulisa izikhokelo kwinqanaba lendawo ngokuzenzekela, isantya, kunye nohlalutyo. Ekugqibeleni, iPowerChord inceda iibrendi zakha ubudlelwane kunye nabathengi babo ngokuqala ngenethiwekhi yabo yabathengisi, ke akukho khokelo luhamba lungajikwa.
Ulawulo lweNkokeli yePowerchord kunye noSasazo
Iibrendi kunye nabathengisi banokusebenzisa zombini iPowerChord's IZiko loMyalelo. NgeZiko loMyalelo, iibrendi zinokusasaza izikhokelo ngokuzenzekelayo - nokuba zisuka phi na - kubathengisi bendawo.
Abathengisi baxhotyiswe ukuba baguqule ezo zikhokelo kwiintengiso. Umthengisi ngamnye unokufikelela kwizixhobo ezikhokelayo zokulawula ukulawula i-funnel yabo yokuthengisa yendawo. Bonke abasebenzi kwindawo yokuthengisa banokufikelela kulwazi olukhokelayo ukukhawulezisa unxibelelwano lokuqala kunye nokwandisa amathuba okuthengisa. Njengoko kukhokelela kwinkqubela phambili kwi-funnel yokuthengisa, abathengisi banokongeza amanqaku ukuze wonke umntu ahlale kwiphepha elifanayo.
Ingxelo ekhokelayo yendawo iqengqeleka ukuya kuthi ga kwi-brand ukuze iinkokeli zentengiso zikwazi ukubeka iliso kwinkqubela phambili kuzo zonke iindawo.
Kuba ukunxibelelana ngokukhawuleza ngundoqo ekuvaleni intengiso, iqonga lilonke lePowerChord libeka phambili isantya. Iibrendi kunye nabathengisi bayaziswa ngezikhokelo ezitsha ngoko nangoko - kubandakanywa neSMS. Oku kunokuba luncedo olukhulu kubasebenzi bokuthengisa basekhaya abangabotshelelwanga kwidesika kunye nekhompyuter imini yonke. I-PowerChord ikwaphehlelele i-One Cofa iintshukumo, into evumela abasebenzisi ukuba bahlaziye ubume bokukhokela ngaphakathi kwe-imeyile yesaziso ngaphandle kokungena kwiZiko loMyalelo.
Uhlalutyo lwe-Powerchord kunye neNgxelo
I-PowerChord ibeka embindini ingxelo ukuze yandise iinzame zentengiso yebrendi yasekhaya. Bayakwazi ukujonga unxibelelwano olukhokelayo kumthengisi wendawo - kuquka ukucofa-ukuya-umnxeba, ukucofa izalathiso, kunye nokuhanjiswa kwefomu ekhokelayo-kwindawo enye kwaye ubone indlela abahamba ngayo ngokuhamba kwexesha. Ideshibhodi ikwavumela abathengisi ukuba balinganise iindlela zevenkile zasekhaya, ezinjengeemveliso ezisebenza kakhulu, amaphepha, kunye neeCTA, kwaye bavavanye amathuba amatsha okuguqulwa.
Ngokungagqibekanga, ingxelo iyaqengqeleka – oku kuthetha ukuba umthengisi ngamnye unokubona kuphela idatha yakhe, abaphathi banokubona idatha yendawo nganye abanoxanduva kuyo, yonke indlela ukuya kuthi ga kwimbono yehlabathi ekhoyo kwibhrendi. Iimvume zingenziwa ukuze zithintele ukufikelela kule datha ukuba ziyafuneka.
Abathengisi bebrand banokufumana ukuqonda kwindlela amaphulo abo okuthengisa asekhaya aqhuba ngayo, kubandakanywa iindleko ngencoko nganye, ucofa, ukuguqulwa kunye nezinye iinjongo. Uhlalutyo lwePowerChord kunye neNgxelo yeNgxelo idibanisa amachaphaza phakathi kweenkokeli kunye nengeniso, ivumela iibrendi ukuba zithi:
Imizamo yethu yokuthengisa idijithali edityaniswe nemigudu yethu yokulawula kunye nokusabalalisa okukhokelayo inikele ngeedola ezingama-50,000 kwingeniso; I-30% yaloo nto iguqulelwe kwintengiso, ivelisa i-1,000 ehamba phambili kwinyanga edlulileyo.
Ukuhlanganisa yonke le nto: I-Grasshopper Mowers isebenzisa iPowerChord ukomeleza iiwebhusayithi zabarhwebi bendawo kunye nokwandisa iinkokeli ezingama-500%.
Abachebi beNtethe ngumvelisi wezixhobo zokucheba ezithengiswa ngokukodwa ngothungelwano lwabathengisi abazimeleyo abamalunga ne-1000 kuzwelonke. Inkampani ibisazi ukuba kukho ithuba lokutsala abathengi abatsha kwaye ikhulise isabelo sayo semarike. Elo thuba lalisezandleni zabarhwebi basekuhlaleni.
Ngaphambili, xa abathengi abanokuthi baphonononge imigca yemveliso kwiwebhusayithi yeGrasshopper, amathuba okuthengisa ancitshiswa njengoko babecofa kwiindawo zabathengisi basekhaya. Uphawu lweNtethe lwanyamalala, kwaye iisayithi zabathengisi zibonise imigca yezixhobo ezikhuphisanayo ezingenalo ulwazi lwevenkile yendawo, ebangela ukudideka kwabathengi. Ngenxa yoko, abarhwebi bebengasaziboni iindlela abazihlawulayo kwaye betsala nzima ukuvala ukuthengisa.
Ngaphezu kweenyanga ezintandathu, iGrasshopper isebenze kunye nePowerChord ukwandisa uhambo lwayo lokuya kwindawo ngokugxila kwiinkokeli, ukudala ukungaguquguquki kohlobo lwedijithali, ukusebenzisa i-automation, kunye nokuxhasa iinzame zomthengisi wentengiso. I-Grasshopper inyuse isikhokelo nge-500% kunye neentengiso ezikhokelela kwi-intanethi ngama-80% kunyaka wokuqala.
Khuphela Ityala elipheleleyo apha
Ufumene ukuKhokela. Ngoku kuthweni?
Omnye wemicelimngeni ajongene nawo amashishini kukuguqula iinkokeli zibe yintengiso. Iidola zentengiso ezibalulekileyo zichithwa ukutsala abathengi. Kodwa ukuba awunazo iinkqubo endaweni yokuphendula kukhokelo oluvelileyo, ngoko iidola ziyachithwa. Uphando lubonisa ukuba sisiqingatha kuphela sazo zonke iinkokeli eziqhagamshelwe ngokwenene. Yenza i-capital kumfutho wamaqhinga akho okuthengisa ngokuphumeza ezona ndlela zilungileyo zolawulo ukuze ube nefuthe elikhulu kwintengiso yakho.
Phendula kulo lonke uKhokelo – Eli lixesha lokwabelana ngolwazi oluxabisekileyo malunga nemveliso okanye inkonzo yakho kwaye uncedise umthengi ekwenzeni isigqibo sokuthenga. Ikwalixesha lokuba ulungele ukukhokela kwaye umisele inqanaba lenzala kumthengi ngamnye onokubakho. Ukusebenzisa unxibelelwano olufanelekileyo nolulolwakho kuya konyusa uguqulo.
Ukuphendula ngokukhawuleza kubalulekile -Xa umthengi egcwalisa ifomu yakho yokukhokela, bakulungele ukuthatha inyathelo elilandelayo kuhambo lwabo lokuthenga. Benze uphando olwaneleyo ukuze babe nomdla kwimveliso yakho kwaye balungele ukuva kuwe. Ngokutsho kwe-InsideSales.com, abathengisi abalandela i-web lead ngaphakathi kwemizuzu ye-5 ngamaxesha angama-9 amathuba okuba baguqule.
Phumeza iNkqubo yokuLandelela – Kubalulekile ukuba nesicwangciso esichaziweyo sokulandela umkhondo. Awufuni ukuphoswa ngamathuba ngokungalandeli ngokukhawuleza okanye ukulibala ngokupheleleyo. Unokucinga ngokutyala imali kwiCRM ukuba awukenzi njalo-ngale ndlela ungagcina imihla yokulandelela, amanqaku aneenkcukacha kumthengi, kwaye unokubasebenzisa kwakhona emva kwexesha.
Bandakanya aMahlakani aPhambili kwiQhinga lakho - Kumthengisi othengisiweyo, ukuthengiswa kwenzeka kumntu kwinqanaba lendawo. Oko kuthetha ukuba umthengisi wendawo yindawo yokugqibela yokuchukumisa ngaphambi kokuvalwa. Xhobisa umthengisi wakho womnatha ngezixhobo zokubanceda bavale - nokuba ngumxholo oya kubenza babe krelekrele kwimveliso yakho okanye izisombululo ezizenzekelayo ukunceda kulawulo olukhokelayo kunye namaxesha okuphendula.
‍Fumana izixhobo ezingakumbi kwibhlog yePowerChord
tags: kumthengisiumthengisi ukhokela uhlalutyouhlalutyo lomthengisiumthengisi ukhokela uhlalutyoingxelo ekhokelayo kumthengisiukuthengisaintetheabachebi bentetheanalytics ekhokelayoukuhanjiswa okukhokelayoulawulo oluphambilii-powerchord
UStephanie Shreve nguSekela Mongameli weNtsebenziswano yamaQabane e PowerChord. Uyisoftware kunye nomphathi wentengiso yedijithali onamava angama-20+ eminyaka ekhokelela amaqela aqhuba kakuhle ukuxhasa iimpawu zehlabathi kunye namaqabane acwangcisiweyo. Ngerekhodi yokusebenza, uStephanie uzama ukwakha ubudlelwane obuqinileyo kunye nabathengi ukwenza izisombululo eziqhuba iziphumo zeshishini. Uyawamkela amathuba avela kwiiteknoloji ezisakhulayo ukufikelela kwiimarike ezintsha kunye nokukhulisa ishishini.
Iingqondo ze-Audiense: I-Intelligence Segmentation Intelligence kunye neSoftware yoHlalutyo
ConvertMore: Guqula Okungakumbi koNdwendwelo lweWebhusayithi Ngele Widget yokuFowuna emva kwefowuni